Ubuntu-Shona - Ubuntu Wiki
Chinangwa chechikwata ndechekuturikira Ubuntu kubva muChirungu kuenda kuShona.Basa iri rinosanganisa kuturikira maPurogiramu nemapeji ebatsiro(Documentation and help pages) tichishandisa gwara rakatarwa papejii.e kutanga nemaProgramu anonyanyoshandiswa.
Enda papeji iyi kuti uvane zvizere.Enda papeji yeChikwata
Mukuturikira maPurogiramu kana maPeji ebatsiro zvinokurudzirwa kushandisa Shona yanhasi (modern Shona) uye Union Shona. Semuenzaniso kunyangwe zvazvo inzwi rekuti Write (in the context of say a command button to excute the write to cd command) richigona kuturikirwa muShona sekuti "Nyora"; inzwi rakakodzera muShona ndi"Bhena" sezvo riiro rinonyanyo shandiswa nevanhu vanoShanda nemaKomputa zuva nezuva. Uyevo Union Shona kana kutiStandard Shona ndoShona isingakanganiswi neChikandamazeko.
Munokurudzirwa kuti muvedzere pane zvinhu zviri papeji rino.
Ubuntu-Shona (last edited 2009-12-24 10:18:50 by gdzoma)